Nagu saabsan - Deganaanshaha CBD
Beeraha Tranquil wuxuu ku faanaa inuu yahay soo saaraha kaliya ee wax soo saarka CBD ee suuqa oo ay ansaxisay Isbahaysiga Cuntada, hay'ad samafal ah ayaa dejineysay heerka Mareykanka ee beeraha waara labaatan sano.
Beeraleydeena waxay raacaan tilmaamo adag oo dhameystiran tilmaamaha beeraha, iyagoo hubinaya in kan CBD wuxuu ka yimaadaa beeraha ilaaliya deegaanka, dhowra kheyraadka dabiiciga ah isla markaana bulshada ka mas'uul ah. Shahaadadan Isbahaysiga Cunnadu waxay muujineysaa in beer, hawd, ama ganacsi dalxiis laga hubiyey heerar adag oo shahaado oo u baahan tallaabooyin macno leh oo ku wajahan joogtaynta deegaanka, bulshada, iyo dhaqaalaha muddada-dheer.
Layaab ma leh in Tranquil CBD ay tahay isha ugu wanaagsan ee fayoqabka kuwa daryeela jirkooda iyo adduunkaba.
At Tranquil CBD, waxaan aaminsanahay in tayadayada ugu sareysa, alaabada fayoobaanta ee la awoodi karo ee laga sameeyay CBD-da hemp-ka soo baxday ay bixiso daaweynta ugu fiican ee dabiiciga ah si kor loogu qaado caafimaadka guud iyo fayoobaanta macaamiisheena.
KELIYA UGU FIICAN
Waxyaalaha xasilloon ee CBD waxaa laga soo saaray tayo sare leh, dhir si qibrad leh loo goostay. Wax soo saarkeenu waa non-GMO mana ku jiraan sunta cayayaanka, doogga, ama Bacriminta kiimikada. Dhammaan alaabooyinkeennu waa dufcaddii ay tijaabisay shaybaarada dhinac saddexaad iyo saliidaheenna ayaa gebi ahaanba ammaan u ah in la isticmaalo. Sidaa darteed haddii aad raadineyso alaabada ugu wanaagsan ee CBD suuqa, ha u sii eegin. Deganaanshaha CBD waa jawaabtaada! Waxyaabaheena tayada leh ha u fududeeyaan noloshaada.
Hadafkeenu waa inaan suuqyada keeno alaabooyin tayo sare leh oo hemp cannabidiol (CBD) ah. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan kuwa kale ku barano faa'iidooyinka soosaarida hemp, waana ujeedkeena inaan isticmaalno alaabteena tayada sare leh oo ah kuwa ugu fiican warshadaha si gacan looga geysto kordhinta caafimaadka iyo fayoobaanta macaamiisheena.
TARBIYADA CBD & HEMP FARMS